कोरोना भाइरस नेपाल: नेपालमै भाइरसको नयाँ प्रकार जन्मने खतरा टडकारो रहेको विज्ञको भनाइ - बर्दिया न्युज
कोरोना भाइरस नेपाल: नेपालमै भाइरसको नयाँ प्रकार जन्मने खतरा टडकारो रहेको विज्ञको भनाइ
बर्दिया न्युज, ८ पुष २०७७, बुधबार १५:३८ प्रकाशित
यूकेमा देखिएको कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ता बढ्दै गएका बेला सरकारले यूकेबाट नेपाल आउनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाल र यूकेबीच सिधा हवाई सेवा नभए पनि विभिन्न देश हुँदै यूकेबाट मानिसहरू आउने गरेका छन्।
सोमवार नै नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले सबै वायुसेवालाई बुधवार राति ११:५९ पछि यूकेबाट वा यूके हुँदै नेपाल आइपुग्ने यात्रुहरूलाई नल्याउन निर्देशन दिएको छ।
जसका कारण यूकेमा देखिएको नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि भित्रिन सक्ने आशङ्काहरू व्यक्त भइरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समिति बैठकले यूकेबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको संयोजक महेन्द्र गुरागाँइले बताए।
तस्बिरको क्याप्शन,यूकेको एक विमानस्थल (फाइल तस्बिर)
पछिल्ला दिनमा परीक्षण घट्नुले पनि सङ्क्रमणले अर्को रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविद्‌मा पाइन्छ।
तस्बिरको क्याप्शन,यूकेका कैयौँ यात्रु कतार एअरवेजको विमानबाट नेपाल आउने गर्छन्
नेपाल भित्रै पनि उक्त भाइरसले अर्को रूप लिने जोखिम कायम भएको औंल्याउँदे सङ्क्रामक रोग विज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, “अहिलेकै कोरोनाभाइरस पटक्कै नियन्त्रण भएको छैन जस्तो देखिन्छ।”
उनी भन्छन्, “त्यस्तो अवस्था रह्यो भने नयाँ प्रकार आएको पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। भाइरसले प्रशस्त खेल्ने ठाउँ पायो भने चाहिँ नयाँ नयाँ प्रकार उत्पन्न त्यसरी हुन्छ।”
“त्यसैले सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुन सक्यो भने मात्रै हामी नयाँ प्रकार आउने सम्भावनाबाट जोगिन सक्छौँ।”
“महामारी नियन्त्रणका सामान्य उपायहरू परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेशन र क्वारन्टीनका काम तीव्र बनाउनुपर्छ। उच्चतम राजनीतिक निकायले यसलाई आफ्नो समस्याक रूपमा लिनुपर्छ र सङ्ख्या कम भएको नक्कली तथ्याङ्कका पछि लाग्न हुँदैद्द” डा. सुवेदीको सुझाव छ।
साभारः बिबिसी नेपाली सेवा
संसदीय दलको नेता बनेपछि प्रचण्डले भने- प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर सरकार बनाउँछौं
यमन: प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू माथि गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा २२ को मृत्यु